Fanimbazimbana ny hasin-drazana: vaky ny fasan’ny mpanjaka ao Miary, Toliara II - ewa.mg
Fanimbazimbana ny hasin-drazana: vaky ny fasan’ny mpanjaka ao Miary, Toliara II
News - Fanimbazimbana ny hasin-drazana: vaky ny fasan’ny mpanjaka ao Miary, Toliara II
Raha ny vaovao ampitaina any anaty
tambajotran-tserasera, niamboho ny alakamisy lasa teo ny zanaky ny
mpanjaka Andrevola Marosaragna antsoina hoe Resambo. Ny alatsinainy
teo no notanterahina ny fandevenana. Nandritra io
fotoam-pandevenana io vao gaga ny fianakaviana sy ny iray foko fa
vaky ny fasana fandevenana ny mpanjaka sy ny mpitan-jiny Andrevola
Marosaragna ao amin’ny kaominina Miary, distrikan’i Toliara II. Tsy
tao intsony ireo razana sy ny fitaovana nalevina niaraka amin’izy
ireo. Manao antso avo, araka izany, ny fianakaviana sy ny iray foko
handraisana fepetra amin’ireo olon-dratsy manimbazimba ny
hasin-drazana sy ny hasina maha Malagasy.
Tao anatin’ny taona maromaro izay,
zary nahazatra ny sofina ny naheno fa nisy naka ny taolambalo
tatsy, very ny hasin’ny razana taroa. Nisy mihitsy aza ny
vanim-potoana nampirongatra ny vaky fasana saika nanerana ny Nosy.
Hatreto anefa, tsy mbola fantatra mazava ny mombamomba izany.
Hangalarina hatao inona ny taolana? Iza no tena atidoha
L’article Fanimbazimbana ny hasin-drazana: vaky ny fasan’ny mpanjaka ao Miary, Toliara II a été récupéré chez Newsmada.
Sainte Marie: manohana ny « Festival des baleines » ny Telma
Hatao, ny 11 hatramin’ny 14 jolay ho avy izao, any Sainte Marie, ny hetsika lehibe « Festival des baleines », andiany fahadimy. Mpanohana ofisialy ity hetsika miavaka ity ny Telma, mpandraharaha voalohany eto Madagasikara amin’ny fifandraisan-davitra.Fotoana ahafahan’ny mpizahatany vahiny sy eto an-toerana hahita mivantana ny hazandranomasina, ny fiarovana ny tontolo iainana an-tanety sy an-dranomasina ary ny lanjan’ny fizahantany eto Madagasikara, indrindra ny any Sainte Marie. Maro ny hetsika ho hita mandritra ireo efatra andro ireo. Ao anatin’izany ny fitsangantsanganana an-dranomasina, ny fanatanjahantena sy hetsika samihafa, toy ny lalao fifaninanana “moto trail”, ny bisikileta VTT, ny “beach soccer”, ny “zumba”, ny fifaninanana mitondra lakana, ny tsipy kanetibe, ny lafiny kolontsaina sy ny fanabeazana ary ny fialamboly maro samihafa ho an’ny rehetra.Maro ny loka hozarain’ny Telma mandritra ity hetsika any Sainte Marie ity. Eo koa ny fanamorana ny fahazoana ny internet sy ny fampihenam-bidy maro, amin’ny alalan’ny fampiasana ny MVola sy ny tolotra samihafa an’ny Telma.Njaka A.L’article Sainte Marie: manohana ny « Festival des baleines » ny Telma a été récupéré chez Newsmada.
Nampianatra maimaimpoana informatika ny tomponandraikitra ao amin’ny boriborintany fahefatra, kaominina Antananarivo Renivohitra. Niarahana amin’ny mpiray ombon’antoka Orange Solidarité ny tetikasa amin’ny fanomezana ny fitaovana entina nanatanterahana izany. Nisitraka izany fampianarana izany ny vehivavy 54 mpitantana fotodrafitrasa ahazoana rano madio fisotro na Association des usagers de l’eau ao anatin’ny fokontany miisa 32. Momba ny bureautique no nanofanana azy ireo ho fanarahana fenitra ireo firaketana an-tsoratra ny fitantanana ny fotodrafitrasa. Hahazo firaketana ao anaty ordinatera, manomboka eto, ny fikirakirana ny fitantanana ny rano. Hifarana ny 29 mey ho avy izao ny fiofanana ka afaka hampihatra ny fahalalana vaovao azony ny mpiofana. L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Afrika sy IEA : maika ny fanovana fampiasana angovo
Miara-midinika amin’ny IEA (Agence internationale de l’énergie) ny firenena maromaro aty Afrika mpikambana ao amin’ny Chambre africaine de l’énergie ny amin’ny fampiasana angovo azo havaozina, hialana tsikelikely amin’ny solika. Loza ho an’ny tany afri­kanina maro, toy ny eto Madagasi­kara, ny tsy fahampian’ny an­govo sy ny fiovan’ny toetr’andro izay efa mandripaka zavatra maro. Mbola anjatony tapitrisa ny olona aty Afrika mampiasa saribao sy kitay, koa tokony hojerena akaiky eo anivon’ny governemanta tsirairay ny vahaolana, sy izay tetikasa hiaraha-miasa eo amin’ny se­hatra iraisam-pirenena. Mahita ireo tompon-kevitra mpitarika amin’ny tokony ho fiovana aty Afrika fa tsy azo ailika ireo kompania vaventy mpamokatra solika sy ny minisitera misahana ny angovo. Ny voalohan’ny volana jolay teo, tokony ho niara-nivory (viséo-conférence) amin’ny IEA izy ireo, saingy tsy tanteraka. Ireo kompania lehibe mpitrandraka solika sy gazy sy ny minisitera mihitsy no mbola tsy mazoto loatra amin’izao fanovana fampiasana angovo izao. Hahatongavana amin’izany, ilaina ny fandraisana anjaran’ny rehetra: ny mpitrandraka solika an’ny fanjakana na ny tsy miankina, ny minisitera misahana ny angovo, ny firaisamonim-pirenena, ny mpandraharaha miaraka mijery akai­ky ny tokony hatao. Maika aty Afrika ny fanovana raha tena mitsinjo marina ny hahasoa ny toekarena ny fitondram-panjakana. Miankina amin’ny fampiasana angovo azo havaozina ny hikajiana ny tontolo iainana. Miankina amin’izay ton­tolo iainana izay koa ny toetr’andro, miantoka ny fambolena sy ny maro hafa.R.MathieuL’article Afrika sy IEA : maika ny fanovana fampiasana angovo a été récupéré chez Newsmada.
Hidongy ny fifidianana loholona hotanterahina, amin’ny zoma 11 desambra 2020, ny fianakaviamben’ny mpanohitra, raha tsy tomombana avokoa ireo fepetra aradalàna mifanaraka amin’izany. « Hajao aloha izay voalaza ao amin’ny andininy faha-80 ao amin’ny fehezan-dalàna mifehy ny fifidianana », hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, omaly. Voalazan’io andininy io fa « isan’ireo mpifidy lehibe handray anjara amin’ny fifidianana ireo lehiben’ny faritra sy ny lehiben’ny faritany miaraka amin’ireo lefiny ». « Tsy feno ny fepetra ka fifidianana tsy ara-dalàna no tadiavina hatao eto ary tsy azo ekena », hoy izy. Nohamafisin-dRamalason Olga, loholon’ny antoko TIM ihany koa fa « tsy te handray anjara amin’ny fifidianana tsy ara-dalàna ry zareo ». « Amboletra no atao eto, hoy kosa izy, satria tsy mba nakàna ny hevitry ny antenimiera akory na io fampihenana ny loholona ho 18 io aza ». Fitadiavana kandidà Etsy an-daniny, efa miatrana ireo antoko miaradia amin’ny fitondrana. Nivory nandinika ny fomba hiatrehana an’izany fifidianana handraisan’ny mpifidy lehibe anjara izany izy ireo tetsy amin’ny Arena Ivandry, omaly. Nitarika ny fihaonana teny an-toerana ny sekretera nasionalin’ny antoko Tanora malaGasy Vonona sady governoran’Analamanga, Rasoamaromaka Hery. Tsy nisy nipika ny resaka. Voalaza anefa fa efa eo ampikarohana an’ireo kandidà handray anjara amin’io fifidianana loholona io ireo mpanao politika akaiky ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. « Mbola ao anatin’ny dinika mihitsy izao ka tsy misy azo resahana aloha », hoy fotsiny ny loharanom-baovao iray. L’article Fitakiana ara-dalana :: Manambana hidongy ny fifidianana loholona ireo mpanohitra est apparu en premier sur AoRaha.
Hiditra amin’ny andininy faha-11 ny fetibe “fesitival” Tsolabe ao Sainte-Marie ny volana oktobra izao, ka vinavinain’ny mpikarakara hatao ny 10 hatramin’ny 13 oktobra izao izany hetsika izany. Mitentina 87.690.000 ariary ny tetibola ilaina amin’ny fanomanana izany fetibe izany, araka ny nambaran’ny mpikarakara Atoa Angelos Adonis. Hetsika ara-kolontsaina, manana ny maha-izy azy hanasongadinana ny kolontsaina Antenosy, sy fampahalalana amin’ny mpizaha tany anatiny na ireo vahiny ny hakanton’ny nosy Sainte-Marie ny hetsika atao rehetra. Misy rahateo mandritra ny fetibe ny fivahinianan’ireo mpanao gazety vahiny mampahalala ny nosy Sainte-Marie mandritra izany. Mandritra, ny hetsika ny volana oktobra, rahateo no fotoana mampisy ny zagnaharibe, na trozina, mandalo sy mitoetra amin’iny fari-dranomasina Sainte-Marie iny. Eo am-pikarohana ny vola entina manomana izany “festival” Tsolabe izany ny mpikarakara amin’izao fotoana izao; satria ankoatra ny zava-kanto sy ny kolontsaina ary ny fizahantany, dia misy ihany koa ireo lalao ara-pananjahan-tena samy hafa sy ara-toekarena ihany koa, amin’ireo fampirantiana samihafa mandritra ny fetibe maharitra efatra andro. Efa mitsangana rahateo ny komitin’ny Tsolabe amin’izao fotoana izao amin’ny fanomanana ity hetsika ny volana oktobra ity. Malala DidierL’article « Festival » Tsolabe ao Sainte-Marie : Hatao ny 10 hatramin’ny 13 oktobra ho avy izao a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fakana bahana. Nidina ifotony tany amin’ny faritra Diana ny Praiminisitra Ntsay Christian, afakomaly sy omaly. Tafiditra amin’ny hisokafan’ny sidina amin’ireo Nosy aty amin’ny ranomasimbe Indianina izao fitsidihana izao.Anisan’ny nojereny ny seranam-piaramanidina “Arrachart”, hisokatra ny 29 oktobra izao. Anisan’izany ny fiomanana sy fepetra napetraka handraisana ny sidina avy any ivelany. Nitsidika ny toby fiantsonan’ny taksiborosy ao Scama ny delegasiona. Hiverina hisokatra, anio, rahateo ny zotra nasionaly any amin’iny faritra iny sy ny aty Antananarivo. Hita fa efa mipetrapetraka ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra, na tao amin’ny seranam-piaramanidina izany, na tao amin’ny toby fiantsonana, araka ny nambarany. Mbola hatsaraina miandalana anefa izany, toy ny fananganana ny “centre d’isolement” ao amin’ny seranana. Namory ireo mpisehatra amin’ny fitaterana koa ny minisitra misahana izany ary nanome toromarika. “Mbola manana fotoana isika handaminana ny hisorohana ny mety ho fiparitahan’ny aretina, indrindra amin’ny fisokafana amin’ireo faritra hafa sy ireo Nosy manodidina. Ahafahana mijery ny mbola fanarenana tokony hatao, ny efa vita, ary ny ho fanatevenana izao fidinana ifotony izao”, hoy ny praiminiistra.Fitaovana sy tohana sosialy ho an’ny any DianaNamory ireo eo anivon’ny CRCO any Diana ny lehiben’ny governemanta avy eo ka nambarany fa mbola miakatra ny tahan’ireo mitondra ny aretina covid-19 any an-toerana. “Hamafisina ny fepetra hahafahana manatevina ny ady atao ary manantena isika fa samy handray ny andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay”, hoy izy. Nanentana ny vahoaka koa ny tenany mba hitandrina sy hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana ho fiarovan-tena sy fiarovana ny hafa, toy ny fanaovana arovava sy orona.Nanolotra “ambulances” 4×4 miisa roa ho an’ny faritra ny praiminisitra ary nilaza fa hampitomboina ny toerana fandraisana an-tanana ireo marary sy ny fanaovana fitiliana. Hahazo fandriana miisa 50 miaraka amin’ny kojakoja samy hafa ny efitrano vaovao ao amin’ny Hopitaly miaramila.Eo amin’ny sosialim-bahoaka kosa, nampanantena ny praiminisitra fa hisitraka ireo tohana sosialy toy ny vahoaka rehetra ny vahoakan’ Antsiranana.Fanorenana fotodrafitrasa eny ifotonyNitsidika ny fandrosoan’ny fanorenana fotodrafitrasa samy hafa sy ireo mbola hatsangana koa ny delegasiona. Anisan’izany ny tetikasa « forage » tao Namakia, hahazoana loharano vaovao hamatsiana rano ny tanàna. Notsidihina koa ireo fotodrafitrasa efa an-dalam-pahavitàna. Eo ny kianja manara-penitra, ny “Maison de la culture”, ny “Lycée” manara-penitra, ary ny fanavaozana ny toby fanangonan-dranon’ny orinasa Jirama ao amin’ny “PK7”. Nojerena ifotony ireo toerana hanorenana tanàna vaovao, sy ny seranan-tsambo “Jasmine”, hanaovana tetikasa vaovao ihany koa.Synèse R. L’article Ady amin’ny covid-19: hentitra ny amin’ny hanarahana fepetra ny praiminisitra a été récupéré chez Newsmada.